MSF oo alaabo gargaar u qaybisey 600 qoys oo barokac ku jooga Jilib - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
© MSF MSF distributes relief goods to drought victims in Jilib, Somalia, July 2011
In ka badan 3600 qof oo si ku-meelgaar ah ay hoy ugu noqotey magaalada koonfurta Soomaaliya ku taalla ee Jilib (Dooxaha Jubbada Hoose) ayaa heley baco fidsan, marokaneecooyin iyo saabuun. Alaabadaa ayaa waxaa bixiyey kooxdeenna ka shaqeeysa barnaamijka
quudin-ku-daweynta carruurta ay nafaqo-xumadu hayso iyo cusbitaal ku yaalla magaalada halkaa ka dhow ee Mareerrey.
“Waxaan maqley in Jilib ay ku taallo xero [barokacayaasha loogu talogaley] oo cunto lagu qaybiyo taas ayaana nagu dhalisey in aan u soo safarno Jilib, “ayaa ay tiri hooyo dhowaan timid oo lix carruur ah haysata, kuwaas oo soo lugeeyey badi masaafada 230 km ah si ay xerada u soo gaaraan. “Waxaan rabney in aan aadno xerooyinka qaxootiga ee Kenya ku yaalla, laakiin iskama bixin karin qiimaha sarreeya ee gaadiidka loogu raaco xerooyinka. Taas beddelkeeda, waxaan nimid Jilib, annaga oo rajeyneyna in aan helno gargaar, “ayaa ay tiri. “Lo’ ayaan lahaan jirney laakiin xoolihii waa naga dhammaadeen [abaarta daraaddeed] afar bilood ka hor. Markii ay naga dhinteen labadii sacaad ee innoogu dambeeyey, ayaan tuuladeenna lug ka soo bilowney waxaana ay nagu qaadatey 15 maalmood in aan soo gaarno Jilib.”
Qaybinta agabkaa gargaarka waxaa looga danleeyahay in lagu bixiyo hoy ay si weyn ugu baahan yihiin dadka ku khasbanaadey in ay ku noolaadaan dhul bannaan halka marokaneecooyinka loogu talogaley in loogaga hortago faafidda cudurka duumada. Xarunta caafimaadka ee Mareerrey ayaa bukaanno tiradoodu sii badatey looga daweynayaa cudurkan.
Wixii loo soo gaarey 4tii Agoosto, Barnaamijka Quudin-ku-daweynta ee Mareerrey waxaa uu 101 carruur ay nafaqo-xumo ba’an hayso oo ay u weheliyaan xanuunno uu ku hayey barnaamijkiisa quudinta degdegga ah, halka in ka badan 740 carruur kale oo nafaqo-xumo ay
hayso lagu qaabiley xarumo kala duwan oo lagu quudiyo bukaan-socodka oo ku yaalla gudaha iyo hareeraha Mareerrey. Waxaan isku dayeynaa in aan ballaariyo adeegyadeenna caafimaadka iyo kuwa quudinta si aan wax uga qabanno baahida badan ee jirta.
MSF waxa ay Soomaaliya si joogto ah uga shaqeyneysey tan iyo 1991 waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisaa siddeeed gobol oo koonfurta Soomaaliya ku yaalla. In ka badan 1,400 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageeraan ku dhowaad 100 shaqaale oo Nayroobi ku sugan, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, daryeel caafimaad iyo taageero la siiyo dadka barokacay, qalliin, qaybinta biyo iyo sahay gargaar ku bixiya sagaal goobood oo ku yaalla Koonfurta-Bartamaha Soomaaliya.
MSF dowladna kama qaadato wax maaliyad ah oo lagu bixiyo mashaariicdeeda Soomaaliya, dhammaan maaliyaddeeda waxaa ay ka timaaddaa deeq-bixiyeyaal gaar ah.
Tags: IDPs, MSF, South Central Somalia